Col. Barre Hiiraale oo ka baxsaday Baydhabo kuna sii jeeda Kismaayo, golaha baarlamaanka oo dhawaan horkeeni doono MOTION ay isaga xureynayaan laba mas'uul ee ugu sareeya dowladda federaalka ah iyo ciidamda Itoobiya oo diiday in ay aadaan Kismaayo. Ruunkinet 15/05/07
Col. Barre Hiiraale oo ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee Soomaliya ayaa la sheegay in uu maanta u baxsaday degmada Baardheere asaga oo ka tagey Badhabo.
Col. Barre oo ay la socdaan 4 gaari oo Tikniko ah ayaa la sheegay in uu gaaray Baardheere.
Warka ayaa intaasi ku daraya in Korneylku uu doonayo in uu aado Kismaayo si uu taakuleyn ciidan u siiyo maleeshida dhawaan kala wereegtay gacan ku haynta Kismaayo Col. Afguduud.
Dhanka kale, warar lagu kasoon yahay ayaa sheegay in dhawaan xildhibaannada ku sugan Baydhabo ay doonayaan in ay horkeenaan baalamaanka Motion ay looga xoreynayo xubnaha baalamaanka taliska awoodda badan ee madaxweyne Cabdullahi Yuusuf iyo Ra'isul wasaare Geeddi.
Motionka ayaa qaar ka mid ah xubanaha baalamaanka ay ku doonayaa in awood la siiyo mudanayaasha baalamaanka iyo oo uu ka mid yahay Sheekh Adan Modoobe oo ay dhawaan u doorteen guddomiyaha baalamaanka.
Warar aan la xaqiin ayaa sheegaya in durbaba ay la billaabay laaluush la siinayo qaar ka tirsan xildhibaannada si ay uga hortagaan Motionkaasi ama ugu codeeyaan wax ka soo horjeeda.
Dhinaca kale, ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay in ay diideen in ay aadaan Kismaayo si ay taageero u siiyaan Col. Afguduud oo dhawaan ay ka xoog roonaadeen maleeshiya taagersan Col. Barre Hiiraale.
Jeneraal Gabre oo ah taliyaha ugu sareeye ee arrimaha Soomaaliya kuna sugan Muqdisho ayaa la sheegay in uu u sheegay madaxweynaha dagaalka Kismaayo u dhexeeyo beelo ayna diyaar u ahayn in ay tagaan halkaasi.
Ra'isul wasaare Geeddi ayaa horay ugu tilmaamay taageerayaasha Col. Barre Hiiraale in ay yihiin argagixiso ku sugan Kismaayo.